रामचन्द्र श्रेष्ठ - कान्तिपुर समाचार
रामचन्द्र श्रेष्ठका लेखहरु :
आजसम्मको गतिविधि हेर्दा लाग्छ, दुई जना तान्त्रिक (ओली र प्रचण्ड) एउटा टेन्ट टाँगेर भित्र बसेका छन् । अनि, सारा मुक्तिकामी मान्छेचाहिँ टेन्टबाहिर बसेर भित्रका ईश्वरबाट केही आउनेछ भनी हेरिरहेका छन् । हाम्रो चेतना, शिक्षादीक्षा, आन्तरिक जनवादको कमी आदिले यस्तै बनाइदियो, मानौं तान्त्रिकहरूले केही खेल, तन्त्रमन्त्र गर्छन्, केही बुटी निकाल्छन्, झारफुक गरेर, इन्द्रजाल पढेर भन्ने किसिमको रह्यो ।’
खोइ के बन्द छ यहाँ ?
जिन्दगीको गतिमा अनायास ब्रेक लागेको छ । सारा दैनिकी बदलिएका छन् । स्वाभाविक र चलनचल्तीको बाटो छोडेर हामी अञ्जान यात्रा गर्न विवश छौं । हुन त ‘नियमित आकस्मिकता’ मा बालकृष्ण समले आकस्मिकतालाई इन्‍कार गरेका छन् । हरेक आकस्मिकताको पछाडि नियमितता हुन्छ भनी वकालत गरेका छन् ।
सम्भावित विपत्तिको अर्थराजनीतिक परकम्प
अहिले विपत्तिको संघारमा छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सिर्जित त्रासद मनोदशाले आक्रान्त बनेका बेला यसको सामना गर्ने जुक्ति सोच्नैपर्छ । आइपर्न सक्ने विपत्ति पक्कै प्राकृतिक हो । सामनाको मुख्य पाटो चिकित्सा विज्ञान नै हो । तर यसका सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक कम्पनहरू सबैभन्दा जटिल हुन्छन्, जसबारे साह्रै कम सोचेका छौं ।
नाच जोगाउने सहर
६९ साल असोजमा मावली गाउँ अर्घाखाँचीको झेंडी पुग्दा भैरमको तालले रात घमाइलो बनाएको थियो  । ६ वर्षपछि निकालिएको भएकाले पनि होला गाउँको रौनक नै बेग्लै थियो  ।
कसको सहर ?
जेठको मध्यतिर बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नं. १ (पुरानो बुटवल), जामे मस्जिदअगाडिको एउटा पुरानो घरमा उपमहानगरपालिकाले डोजर चलायो । उक्त घर बिटौरी जग्गामा अवस्थित थियो  ।
इतिहासको लौरी : वर्तमानमा विचरण
हरेक मान्छे विगतको पदचिह्न र भविष्यको परिकल्पनासहित वर्तमानमा विचरण गर्छ । वर्तमान घटनाहरूको जरा खोज्न विगतका परिघटनाहरू खोतल्नुपर्छ । हुन त, एकथरी चिन्तकहरू वर्तमानमाथि इतिहासको छाया पार्नुहुन्न भन्ने जिकिर पनि गर्छन् तथापि विगतको अध्ययनबिना वर्तमान बुझिँदैन ।